Andao jerentsika miaraka sy hampiarantsika aza hoe ireto torohevitra ireto. 1- Tsy sazy ny fisakafoanana fa filàna (besoin). Mila misakafo isika satria ilain’ny vatana izany. Ary tsy natao ho sesefana ny sakafo fa natao hitondra « plaisir » ihany koa. Miainga avy aminao aloha izany ilay izy, Atao am-pitiavana sy am-pifaliana ny fikarakarana sakafo sy […]
Zaza mitohana : rahoviana vao tokony hanatona dokotera ?
Tranga mandalo, mety hiseho amin’ny zazakely rehetra, indrindra ireo efa manomboka mihinana sakafo hafa ankoatra ny nonon-dreny, ny fitohanana. Tsy dia mampitahotra izy io, amin’ny ankapobeny, saingy misy tranga sasany tokony anatonana dokotera… Manomboka eo amin’ny faha-enim-bolany Fikorontanan kely eo anivon’ny fandevonan-kanina sy ny asan’ny tsinay ny fitohanana. Tranga mety hiseho eo amin’ny zazakely, eo […]
Inona no antony mampitomany ny zazakely?
Reraka sa te hatory? Ho an’ny zaza dia mikotaba daholo ny manodidina azy. Adinontsika matetika fa mila fahanginana ny zazakely. Tsy hoe tsy akory ahato daholo ny atao rehetra, fa kosa atao amin’ny feo malefaka tsy dia mankarary ny sofiny izany. Ny fahitalavitra, ny feo rehefa miresaka, ny feo rehefa manakisaka fanaka, sns ireny dia […]
Fanampiana ny zaza misy fikorontanan’ny fihetseham-po
Ahoana no hanampiana ny ankizy manana fihetseham-po miiba: fahatezerana, fahasiahana, toe-po misendoatra, fialonana, sns… Ireo zaza mety mahatsapa tena ho meloka na tsy ilaina. Mety mananosarotra na mitaky tsy faharetana sy tsy fahatsoram-pon’ny ray aman-dreny mantsy izany. Ahoana no ahafantarana fa manana fikorontanana ara-pihetseham-po tokoa ny zanakao? Misy ireto fitondran-tena manaraka ireto mety hanampy anao […]
Raha mivonto ny nonon’ny vehivavy mampinono: mety ho mastite ve?
Ny Mastite na inflammation du sein Inona izany mastite? Ny Mastite dia aretina mitranga ao anatin’ny nonon’ny vehivavy – matetika dia ny vehivavy mampinono no tratrany izay mety arahina infection io na tsia. Matetika dia bactéries tafatsofoka any anatin’ny nono any no mahatonga azy io- lasa mastite infectieuse izy. Tataka kely eo amin’ny loha-nono […]
Fanasana oron’ny zazakely
-Aorirana tsara ny zaza. -Tazomina ny tarehiny mba tsy hihetsika izy -Ny orona ambony no ampidirana ilay sérum physiologique (na seringue kely misy ranon-tsira). Eto izy orona havanana. -Tifirina indray mandeha dia mivoaka amin’ilay orona ambany izy avy eo -Rehefa madio ny rano mivoaka dia ajanona. – Tsy tokony ho lasa any amin’ny tenda ny […]
Ny KIBO « STRESS »
Ny kibo « stress » : Toy ny baolina izay izy ity, ary ireny olona somary sarotiny ireny no misy azy. AHOANA NO AHAFANTARANA AZY Tsy dia miavotra be loatra ny kibo vokatrin’ny stress fa ohatran’ny boribory tsara izany izy ary somary ambanimbany no tsara zara tsara toy ny baolina. Matetika ireny olona sarotiny na koa […]
Ny fanadiovana ny fivaviana na ny « toilette intime »
Ny toilette intime dia ny fanadiovana ny fivaviana. Ao amin’ny taovam-pananahan’ny vehivavy ao dia misy ny atao hoe flore vaginale, mila kolokoloina tsara izy io satria mora simba tokoa izy no miaro ny taova amin’ny loto mety ho tafiditra rehetra ao ami’ny taova ao. Ireny loto ireny mantsy dia miteraka aretina maro be tsy […]
MENOPAUSE : RANONA VOATABIA NO IADIANA AMINY
Raha araka ny fikarohana nataon’ny manam-pahaizana any ivelany dia anisan’ny manampy ny vehivavy amin’ny menopause ny fisotroana ranona voatabia. Ny tena tsara dia fanaovana azy ho jus. Marihina fa ny hampihenana ny fanaintainan’ireo fambara izay mitranga amin’ny vatan’ny vehivavy tojo an’izany zavatra izany no ilaina ilay voatabia fa tsy hanafoanana ny menopause akory. Ny […]
PAIKA TSOTRA HO AN’NY ANKIZY
-Raha sendra manavy amin’ny alina dia maka bà kiraro vontosana vinaigre de cidre atao amin’ny tongony -Kohaka: maka ranona voasary makirana tapany dia asiana tantely 2 sotro kely,somary afanaina kely -Tenda: manao gararaka amin’ny ranon-tsira matimaty -Marary loha: mievoka rano mafana atao anaty bol asiana vinaigre de cidre na huile essentielle menthe poivrée -Kaikitry […]